Homes for Sale - Guryaha aan caadiga ahayn ee dunida oo dhan Natiijooyin Gaar ah
Brenda Thompson - Khabiirka Xoolaha iyo Hantidhawrka Guryeynta
Raadin Gaar ah? Maxaa Qeexaya Raadin Gaar ah?
Adeegyada Suuq-geynta Shirkada Khaaska ah
Qor guri aan Caadi ahayn!
Guryaha gaarka ah ee iibka
Sariir iyo Quraac ama AirBnBs
Qalcadaha iyo Chateaus ee iibka ah
Kaniisadaha la badalay
Guryo La Xareysto, Bermed ama Guryo Dhulka Hoostiisa ah
Guryaha Taariikhiga ah iyo Guryaha
Faraska fardaha iyo beeraha
Geli Qolalka & Guryaha Rustic
Guryo Isku Filan, Prepper iyo Guryo Ka Baxsan Grid
Guryaha Laymanka aan caadi ahayn
Guryo casri ah oo caadi ah
Guryo aan caadi aheyn
Guryaha kale ee aan caadiga ahayn ee iibka
Dhul & Acreage
NOOCA GURIYEYNTA GURYAHA
Guryaha ka dhex muuqda Dadka
In ka badan 65,000 Iibsadayaasha Guryaha ee Gaarka ah ayaa doonaya inay arkaan Hantidaada
Aan Caan Ka Dhigno!
$ 40 / Bishii
Brenda! Tani waa qurux badan! Waad ku mahadsan tahay shaqadaada iyo dareenka aad si faahfaahsan u leedahay. Qaab -dhismeedka iyo qaabaynta weyn. Tani waa mid ka sarreysa oo ka sarreysa wixii aan filayay.
Jane M. (Iibinta Mulkiilaha)
Mahadsanid! Goobtaadu runtii waxay keentaa iibsadayaal u gaar ah oo kaamil ah! Alla duco!
Beth P (Iibinta Mulkiilaha)
Subax wanaagsan Brenda, Waxaan iibinay gurigeena! Qiimaha lacag caddaan ah oo buuxa ma bixiyo wax ka-reebitaan ah waxa-waligeed ah! Aad ayaan u faraxsanahay, ma bilaabi karo inaan kuu sheego. Waan bogaadinayaa dhammaan waxaad samaysay. Waxaan runtii ku talin doonaa adeeggaaga iyo goobtaada.
Patricia E. (Iibinta Mulkiilaha)
Gacaliye Brenda, Waxaad ka gudubtay baaqii waajibaadka. Aad baan ula dhacay shaqadaada gaarka ah iyo taabashada ...
Elizabeth S (Iibinta Mulkiilaha)
Waa maxay xayeysiis heer sare ah - Wow! Waad ku mahadsan tahay, Brenda, saaxirnimadaada!
Walter (Iibinta Mulkiilaha)
Kaliya waxaan rabay inaan idhaahdo waad ku mahadsantahay dhamaan caawimadaada. Faahfaahintaada guriga ayaa keentay guryo badan oo iibsadayaal ah. Dad badani way arkeen waxaana lagu iibiyay 20K qiimaha lagu weydiinayo! Weli waxaa isoo wacaya telefoonno. Waxaan u maleynayaa in sharaxaaddaadu ay ka caawisay helitaanka dalab kor ku xusan.
Pat (Iib Ah Milkiilaha)
Waxay u egtahay qurux. Waxaad sameysay shaqo cajiib ah. Aad ayaan ula dhacay. Kuma mahadsanidin karo dadaalka. Waan ka sii farxi kari waayey.
Taajir (Iib Ah Milkiilaha)
Kuma mahadcelin karo wax ku filan dhammaan caawimaadda iyo taageerada aad siisay intii aad jidka ku jirtay. Haddii aysan adiga ahayn ma ogi in aan illaa iyo hadda howsha ku sii socon lahaa. Inbadan ayaad isiisay dhiirigelin goor hore, markasta oo aan wacana waad jawaabaysaa. Taas macnaheedu waa adduunka aniga.
Monique (Iibinta Mulkiilaha)
Mahadsanid!!! Waxaad tahay Suuq Sare. Jawaabtu markiiba way noqotay! Waxaad baran kartaa koorso ku saabsan suuqgeynta Brenda! Xaqiiqdii waxaan ahaan lahaa safka hore.
Brenda, waxaad si layaableh ugu sameysay sharaxaadda liistada. WAAD KU MAHADSAN TAHAY - adigaaaminsan"& XANUUNKA ku saabsan liiska guryaha.
N. Kuhn iyo Qoyska (Waxaa Iibinaya Mulkiilaha)
Runtii, waxaad u taagan tahay sidii xiddig ifaya marka loo eego xirfad-nimada, hufnaanta, xamaasadda, iyo daryeelka. Waxaan jeclaan lahaa inaan guriga kaaga iibiyo sababahan awgood. Hambalyo wanaagsan!
Fran G (Iibinta Mulkiilaha)
Kaliya waan jeclahay sida aad isugu wada xirtay boggagaaga. Waxaad waqti u qaadataa inaad si dhab ah wax u aqriso oo aad u hesho dareen oo aad u qaadato dhibcaha sare. Taasi waa dhif iyo naadir oo waxay kaa dhigeysaa mid gaar ah! Waxaan ku faraxsanahay inaad haysato. Aad baad u mahadsan tahay ~
Faith L (Wakiilka Keller Williams)
Waxaad tahay Cajiib! Iibyaheygu wuu jeclaa waxaad sameysay!
Meg L. (Wakiilka Hantida ee Edina)
Waad ku mahadsan tahay daacadnimadaada iyo shaqada aad ku bixisay feylkayga.
Guy L. (Iibinta Milkiilaha)
Haddana waxaad qabataa shaqo yaab leh!
Xaqiiqdii waan ku qanacsanahay sida foojignaanta leh ee aad uhesho liistadayada with
Angela B (Iibinta Mulkiilaha)
Waxay u egtahay qurux had iyo jeer!
Faith L. (Wakiilka Keller Williams)
Tani waxay ahayd geedi socod sidan u fudud waana ku faraxsanahay dhammaan gargaarkaaga!
Dustin B (Wakiilka)
CAJIIB! Waan la dhacay natiijooyinka. Aad baad u mahadsantahay!
Gurigeenna waxaa loo qorsheeyay inuu xirmo Jimcaha! Waad ku mahadsantahay dhamaan wixii aad sameysay. Waxay igu caawisay adoo ii sheegaya inaad "sii deyso". Way adkayd!
Bethany M (Iibinta Milkiilaha)
Marnaba kama fileynin inaad tan ugu dadaashid maxaa waa igu kacday. Mahadsanid. Waxaad tihiin shirkad heer sare ah.
Sam (Iib ah Milkiilaha)
Nabad, Brenda, I doonayay inaan ku ogeysiiyo inaan hayno aqbalay dalabkii gurigeenna! Aad baad ugu mahadsantahay shaqada adag ee aad u hayso suuq geynta hantida aduunka!
Carl (Iibinta Milkiilaha)
Waxay umuuqataa Brenda wayna dhaaftay filashadeyda. Waan ku faraxsanahay waxaan la kulmay boggaaga internetka!
Matt (Wakiilka Realty Real Better)
Eeg Our Homes Unique Sale
Fanaaniinta Atlanta Dib u gurasho
Dhulka Taariikhiga ah ee Calaamadaha
4 Buuxda, 1 BadhQubeyska
Guriga Barn Cas & Guriga martida
4 Buuxda, 2 BadhQubeyska
Aaga Asheville Dream Acreage
Fursad Dhaqancelinta Guriga
1 Buuxda, 1 BadhQubeyska
Raaxada Biyo-mareenka Layaabka leh-Eco-saaxiibtinimo
Barn Home Beddel
Guriga Prepper ee Kanada
8 Jidka Stonehouse
Fursad ganacsi oo taariikhi ah
700 Galbeed 18aad St
1 Buuxda, 2 BadhQubeyska
Haanta Biyaha Guriga Macquulka ah
Wareega 32' dheer x 28' dhexroorka saldhigaCagaha Square
Nasashada USVI Waterfront Home ee Magens Bay
Hoyga Barakaysan ee La Rogay
Winfield, Kansas, 6156
3 Buuxda, 1 BadhQubeyska
Eeg Dhammaan Guryaheena Gaarka ah ee iibka
Ku iibinta gurigaaga gaarka ah?
Xayeysii Hantidayda - $ 40 / Bishii
Dhisidda Mashruuc Dhaqameed ee aniga ii ah
Hadda waxaad ku dhejin kartaa guryahaaga gaarka ah boggayaga $ 40.00 bishiiba!
Ama, waxaan ku dhisi karnaa barnaamij gaar ah oo suuq-geyn ah!
Raadinta Gaarka ah waxay u kala saartaa guryaha qaab gaar ah. Haddii aad rabto inaad iibiso gurigaaga aan caadiga ahayn waxaa lagu qori doonaa oo si buuxda loogu iibin doonaa halkan - ama - haddii aad rabto inaad iibsato, dhagsii qaabka hantida ee adiga ku xiisaynaya.
Gaarka ah "Finds…" - Ku Raadso Guryaheena Gaarka ah ee Iibinta Qaybta Hantida
Ma leedahay guri gaar ah oo aad jeceshahay inaad ku aragto bartayada?
Waxaan kuu rogeynaa Roogga Casaanka ah!
Raadi Out More
Maxay tahay sababta aan u bilaabay "Finds ..."?
Fikradda Gaarka ah "Finds…" waxay ka soo martay waayo-aragnimadayda shaqsiyadeed ee iibsade, ka dibna iib ahaan - muddo dheer ka hor intaanan noqon wakiilka guryaha ijaarka.
Adiga oo kale, Waxaan haystay guryo badan oo u gaar ah oo iib ah. Iibsade ahaan, waan ka xumaaday la shaqeynta shirkadaha guryaha ee caadiga ah oo aan fahmi karin inaan raadinayo guri gaar ah, sidaa darteed waxay si isdaba joog ah i tusinayeen heerarka caadiga ah iyo kuwa aan caadiga ahayn ee ku habboon xuduudaha cidhiidhiga ah ee MLS-ka maxalliga ah.
Markii aan diyaar u ahaa inaan iibiyo guryaheyga gaarka ah, waxaan ogaaday in shirkadaha dhaqanku ay ka maqan yihiin aqoonta, xirfadaha, iyo khibrada suuq geynta guryaha aan caadiga ahayn, sidaa darteed, waxaan qaatay sanado badan oo khibradeyda suuq geyn ah oo aan kahelay Agaasimaha Suuqgeynta Suuqa Kala iibsiga ee New York, marka la isku daro tan oo leh liisanka guryaha si loo buuxiyo farqiga aadka loogu baahnaa ee ku saabsan warshadaha guryaha, iyo voila! Gaarka ah "Finds…" ayaa dhashay!
Waxaan suuqgeynaa oo aan dhiirrigelinnaa guryaha aan caadiga ahayn iyo guryaha gaarka ah ee iibka ah.
Aynu ku caawinno. Waxaan nahay wakaalada xayeysiinta guryaha aan caadiga ahayn. Waxaan sidoo kale nahay Realtors u heellan helitaanka guryo gaar ah oo la iibiyo.
Noo ogolow Hantidaada gaarka ah
U beddel sawirka hantidaada - U ogolow caawimaad gaar ah "Finds ...". Waanu ogaan doonaa gurigaaga - qor wixii ku saabsan adigoo isticmaalaya erayada saxda ah ee muujinaya tayadiisa gaarka ah. Waxaan markaa kobcin doonaa "Hantida Hantidhowrka" iyo ololaha suuq-geynta oo loogu talagalay in lagaa helo iyo inaad hesho iibsadaha ugu fiican ee raadinaya guri sida adigaaga.
Naqshadeynta Biophilic - Ku darista Gurigaaga
Guryaha Weelka Maraakiibta
Fududee raadintaada "Your Find ..."
Copyright Xuquuqda Dhamaan © 2016